Maxkamadda Sare ee Puntland oo maanta markale dib u dhigtay Kiiska Caasho Ilyaas. -News and information about Somalia
Home News Maxkamadda Sare ee Puntland oo maanta markale dib u dhigtay Kiiska Caasho...
Maxkamadda Sare ee Puntland oo maanta markale dib u dhigtay Kiiska Caasho Ilyaas.
Maxkamadda Sare ee maamulka Puntland ayaa maanta ku dhawaaqday in markale ay dib u dhigtay xukunka ragga loo haysto in ay ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii loo geystay Caasho Ilyaas Aaden oo ahayd gabar yar oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee Gobalka Mudug.
Maxkamadda ayaa maanta mar kale dhegaysatay dacwadaha ay kala qabaan labada dhinac gaar ahaan Qareenada difaacaya kuwa horey dambiga loogu helay qaarkoodna qirtay iyo Xeer Ilaalinta Maamulka Puntland.
22 bishan ayaa la filayaa in go’aankii Ugu dambayay ay ka qaadato maxkamada kiiska la xiriira kufsigii iyo dilkii loo geystay Caasho Ilyaas Aaden.
Maxkamadaynta raggan ayaa dhowr jeer oo hore dib u dhacday, iyadoona qareennaddii u doodayey ay codsadeen in waqti dheeri ah la siiyo.
Previous articleSAWIRRO: Cabdiraxmaan C/Shakuur Oo Lagu Soo Dhaweeyay Dhuusamareeb
Next articleSAWIRRO: Madaxa Xukuumadda Galmudug Oo Qaabiley Cabdiraxmaan C/Shakuur
DEG DEG: Kulan Ka Dhan Ah Jubbaland Oo Ka Socda Villa...